သောက်စရာ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီ4မိနစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တို့လက်ဖြင့်လုပ်သောနိုင်ဒဏ္ဍာရီကော့တေး 5
အိမ်မှာနှစ်သစ်ကူးပါတီမှာကျော်ကြားကော့တေး - ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်အေးမြပါ!4ကမ်းလှမ်းမှုကိုကမ္ဘာကျော်သောက်လော့။ သငျသညျသန်းခေါင်မှသူတို့ကိုရုံ5မိနစ်ချက်ပြုတ် - ...
လက်ဖက်ရည်ကဘာလဲ - ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လုပ်ပါစေ
လက်ဖက်ရည်ကဘာလဲ? ငါကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေကိုကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်ထင်ပေမယ့်နေဆဲရဲ့အသေးစိတ်ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့, ကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်မသောက်သည့်နံနက်စာစားပွဲ၌ကျွန်တော်တို့အတော်များများ ...
အဆိုပါအသုံးဝင်သောမီးဖုတ်ထားသောနို့? ဘယ်လိုပုံမှန်အတိုင်းကှာခွားသနညျး မီးဖုတ်ထားသောနို့င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကပဲအစားအသောက်များတွင် neobhodimovklyuchat အနည်းငယ်နို့ vhoditbolee တရာအသုံးဝင်သော komponentov.Ego ၏ဖွဲ့စည်းမှု analogov.V မရှိသေးပေ ...
ဘယ်လိုကော့တေး kislarodny သလဲ?
အောက်စီဂျင်ကော့တေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကော့တေး၏ထုပ်ပိုးမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုများသောအားဖြင့်ရေးသားလေ့ရှိသည်။ ) ကောက်ရိုးများဖောင်းပွလာပြီးနေရောင်အောက်တွင်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့မပါဘဲ - လမ်းမရှိသော! သူကိုယ်တိုင်ထိုကဲ့သို့သောကလေးငယ်ကိုစားခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်အိမ်လုပ်စပျစ်ရည်ကိုအတူဖြူပေါ်တွင်လက်အိတ်၌အပေါက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့လိုအပ်သနည်း အဆိုပါလက်အိတ်, ဒါမှမဟုတ်သောအခါအပြုတော်မနှင့်အတူငါမပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်စပျစ်ရည်ကို-ချမှတ်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းများအတိုင်း, ပိတ်ဆို့ပါစေ။ (ရေတံဆိပျ) အားလုံး ...
စင် UHT နို့၏အသက်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုတာဘာလဲ? ကောင်းပြီနှင့် ပတ်သက်. ကျေးဇူးပြုပြီး pasteurized ။
စင် UHT နို့၏အသက်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုတာဘာလဲ? ကောင်းပြီနှင့် ပတ်သက်. ကျေးဇူးပြုပြီး pasteurized ။ Pasteurized နို့အပူချိန် 70-75S မှာလုပ်ငန်းများ၌သောနို့ဖြစ်ပါသည်။ Pasteur သည်ပျက်စီးခြင်း toxigenic သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ရည်ရွယ်ချက်။ ဒီကုသမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ...
အာရေဗျကဘာလဲ? ကော်ဖီသည်အခြားဘာတွေလဲ? Mocha! မူလကအီသီယိုးပီးနှင့် robusta (ကွန်ဂိုကော်ဖီ) မှ -Grade အာရေဗျ။ သည်အခြားကော်ဖီသစ်ပင်များ, သူတို့၏ပဒေသာ, စားသုံးဆီအမြင်မပေးပါဘူး။ အမျိုးအစားများ ...
7 နှင့်အဆင့်မြင့်ဘီယာအရောင်ခွဲခြား၏ထိုကဲ့သို့သောခိုင်မာတဲ့မှောင်မိုက်ဘီယာ tmnoe ဘီယာနှင့်အတူရုရှားတွင်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောစပိန်အဖြစ်အချို့သောအခြားဥရောပနိုင်ငံတွေအတွက်ကျယ်ပြန့်သည်။ ...
ဘယ်လိုအေးစက်နေတဲ့ချယ်ရီ Kiselev ထံမှချက်ပြုတ်ဖို့ ????
ဘယ်လိုအေးစက်နေတဲ့ချယ်ရီ Kiselev ထံမှချက်ပြုတ်ဖို့ ???? Berries ပါ, ရေကိုထည့်သွင်းသကြားထပ်ထည့်တဲ့အရသာ compote ချက်ပြုတ်။ ကစီဓါတ်ပါမှေးမှိန်: 1l kompota- မပြည့်စုံဇွန်းမှာ KROKHMAL ရေအေးသို့မဟုတ် compote ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာပျော် ....
အိမ်မှာလင်မနစ်အောင်ဘယ်လို? နှစ်ခုသံပုရာ (လတ်ဆတ်သော, အရည်ရွှမ်း), ရေတစ်နှစ်ခွဲလီတာ, ခြောက်လသကြားဇွန်းနှင့်လတ်ဆတ်သောပူစီနံအနည်းငယ်အရွက်။ အကြှနျုပျ၏သံပုရာတဝက်စီအတွက်သံပုရာဖြတ် ...
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာဗော့ခဲခဲနိုင်သလား? အကယ်၍ ကောင်းလျှင် -28,7 C နှင့်အောက်မှမှန်သော်လည်းတန်ဖိုးများကွဲပြားပါက 30 C ၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အောက်တွင် -25 သည်အေးသည်။ Checked ။ မီးလောင်ရာ - မှ
စပျစ်ရည်ကို blending ဖြစ်စဉ်ကို nazyvaetsya- ...
စပျစ်ရည်ကို blending ဖြစ်စဉ်ကို nazyvaetsya- ... လျှင်နေဆဲ, စပျစ်ရည်ကိုများသောအားဖြင့် nazyvatsya စပျစ်ရည်ကို smeschivayut ပါဘူးလို့မရပါဘူးသူတို့သည်စပျစ်ရည်ကိုရောမွှေမတကယ်တော့ ... နှင့်ရောထွေးဖျော်ရည် mash နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ရောနှောနေခြင်း ...
ကဖိန်းဓာတ်ပါတဲ့ကော်ဖီ - ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။
ကဖိန်းဓာတ်ပါတဲ့ကော်ဖီ - ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။ ဒါကရာဘာအမျိုးသမီးလိုပါပဲ ကော်ဖီဖျော်ထားတဲ့ကော်ဖီပါ၊ ဖိအားများလာတဲ့အခါငါနွေရာသီမှာသောက်တယ်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်လို့မပြောနိုင်ပေမဲ့လက်ဖက်ရည် ...
စျေးပေါဝီစကီကောင်းသော ... ?
ကောင်းသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဝီစကီ ... ? ကောင်းမွန်သောလထက်ကောင်းသည်။ ဦး စားပေး: 1) ။ အနီရောင် Label2) ။5label ဒီဝီစကီတွေဟာအရသာရှိပြီးနူးညံ့ပြီးသင်တစ်ထောင်အထိထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်။ မြင်းဖြူယေဘူယျဝီစကီ - စျေးကြီးသောဝီစကီပိုကောင်းသောဝီစကီ ...
စပျစ်ရည်ကို taster zzzz zzzz zzz zzz Taster များ၏ဝိုင်မြည်းစမ်းသူမြား၏နာမကိုအမှီဖွင့်ထုတ်ကုန်ကြိုးစားနေကြောင့်ဝေဖန်မရနိုငျသောစံနှုန်း, ပေးသည်ကိုမရ။ တောင်မှရှေးဟောင်းရောမမွို့ရှိ, said: ...
စာရွက် eggnog Give
စာရွက် eggnog နှစ်, 2-3နာရီ။ ဌပေးပါ။ သကြား, 1 Tsp ။ ထောပတ်, 1 နာရီ။ ဌ။ ကိုကိုးအမှုန့်။ လူအားလုံးတို့သည်ပေါင်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့။ သငျသညျသံပုရာဖျော်ရည်အနည်းငယ်ကျဆင်းလာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Eggnog ...
ဘယ်လိုအိမ်က Grog ATP မှာချက်ပြုတ်ဖို့ ???
အိမ်တွင် 6-8 ခုနှစ်တွင် Grog ??? ATP ချက်ပြုတ်နည်းများ grog COFFEE ချက်ပြုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ 0.5 ဌ 100 ml ကိုဘရန်ဒီ, သကြားရည် 50 ml ကို kofeynyynastoy 500 ml ကိုသံပုရာ Rum ။ ပူလောင်း (သို့သော် ...
အဘယ်အရာကို Scotch ဝီစကီစေသည်? ယင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကဘာလဲ?
Scotch ဝီစကီတွေကဘာတွေလဲ။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကဘာလဲ Moonshine !!! Plus အားအဖွားရဲ့စည် !!!! ဝိုင်စကီ၏စည်များတွင်အိုမင်းနေသောထင်းရှူးပင်ပေါက်များကိုသန့်စင်ပြီးသောလသည်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိပ်ကမ်း 777! သင်ဤ napiok သောက်ရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖြစ်? အဘယ်သူသောက်, အဘယျသို့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်မည်သို့မြည်းစမ်းဖို့ရေးလိုက်!
ဆိပ်ကမ်း 777! သင်ဤ napiok သောက်ရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖြစ်? အဘယ်သူသောက်, အဘယျသို့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်မည်သို့မြည်းစမ်းဖို့ရေးလိုက်! အကြောင်းကဒီသောက်ရေးနှင့်မော်ကွန်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ 60-ies ခုနှစ်တွင် ...
ဘီယာနှင့်ဘီယာသောက်ခြင်းအကြားခြားနားချက်များကဘာလဲ။ ဘီယာသောက်ခြင်းဟူသောဝေါဟာရသည်ရုရှား၌သာတည်ရှိပြီး၎င်းအားဘီယာနှင့်အချိုရည်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်နည်းပညာစည်းမျဉ်းများအရရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအစိုးရလက်အောက်ရှိ ...